အလိုအလျောက်ဘားမျက်နှာပြင် မှအကောင်းဆုံး အလိုအလျောက်ဘားမျက်နှာပြင် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲတွင်စေ့စပ်, နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပါပြီ အလိုအလျောက်ဘားမျက်နှာပြင် အတူတူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိထုတ်ကုန်များအပြင်, ငါတို့သည်လည်းပြီးစီးများအတွက်စိတ်ကြိုက်အမိန့်ကိုလက်မခံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပြည်တွင်းစျေးကွက်နဲ့နိုင်ငံခြားက countries.Therefore တလျှောက်လုံးကောင်းကောင်းမသွားခဲ့ပြီ, ငါတို့ထံတင်ပြဆွေးနွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် constantly.We ရေရှည်တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတည်စေခြင်းငှါအလိုရှိ၏ဆန်းသစ်တီထွင်ဆက်လက်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မသွားပါ။
ပုံစံ - BS
BS-အမျိုးအစား&တောင်ကြီးမြို့;rake type ကိုဆီသို့ ဦး တည်စစ်ဆင်ရေး,rake design အသစ်မူပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုသည်.အရာ ၀ တ္ထုများကိုပိုမိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့်ချို့ယွင်းသည့်ထွန်ခြစ်ခြင်းနှင့်စုတ်တံများ.
ချောနှင့်ချုံပုတ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းအားလုံးသည်ပလတ်စတစ်များ ဖြစ်၍ ရေတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်နှင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့်သည့်အခါချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။.
ကိရိယာတစ်ခုလုံးကို SUS မှပြုလုပ်သည်-304 ချေးခံပစ္စည်းများနှင့်အတူမြန်ဆန်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်.
ကျနော်တို့ Acid နှင့်အတူအထူး rake စုတ်တံရှိသည်&အယ်ကာလီ-အစိုင်အခဲများကိုသယ်ဆောင်ရန်နှင့်စုဆောင်းရန်အတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်.
မျက်နှာပြင်ကုသမှု:မျက်နှာပြင် pickling နှင့်ဆန့်ကျင်-သံချေးကုသမှု(ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sludgetreatment.com.tw/my/automatic-bar-screen.html
အကောင်းဆုံး အလိုအလျောက်ဘားမျက်နှာပြင် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် အလိုအလျောက်ဘားမျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်
Rake Bar မျက်နှာပြင်